Tuesday July 26, 2016 - 01:02:01 in Wararka by Xarunta Dhexe
Goobaha dibu dhiska lagu wado ayaa waxa kamid ah suuqi degmada Warsheekh oo runtii ahaa mid aad qadiimi u ah isla markaana maamulka degmada uu go’aansaday inuu dibu casriyeen ku sameeyo si ee uga faa’iideestaan bulshada reer Warsheekh.
Hasa yeeshe inti lagu guda jiray dibu dhiska suuqa ayaa howlwadeenadi hoosha waday waxey as-aaska hoose ee dhulka ugu tageen lafaha meydad oo muran xoogan kadhax dhaliyay dadka deegaanka iyadoo si weyn loogu murmay xiliga ee dadkaasi geeriyoodeen.
Dhacdadaani oo noqotay mid si weyn ee u hadal hayeen dadka deegaanka 24-ki saac ee ugu dambeeyay ayaa sidoo kale dadka keydiya taariikhda degmad Warsheekh ee arintaan ku tilmaameen mid ka markaati kaceyso taariikhda fog ee degmada leedahay.
Qaar kamid ah aqoonyahanada kasoo jeeda degmada Warsheekh ee kusugan qurbaha ayaa soo jeediyay talooyin wax ku ool ah, iyagoo kutaliyay in xiriiro lala sameeyo hay’adaha qaramada midoobe uqaabishan baaritanaka lafaha bani aadamka ah ee geeriyooday xiliiyadi hore.
Ma cada xiliga ee ahaayeen lafaha meydadka lahelay, hasa yeeshe tilmaamaha la bixiyay ayaa muujiinayo iney yihiin meydad ka yimid xiliyo aad ufog oo ka fog qayaasaha la maleesan karo, sidaana waxa ku waramay qaar kamid ah waxgaradka reer Warsheekh oo uwaramay shabakada Warsheekh
W/D, Abdirahman Sheik Abdullahi